Maalinta: Meey 18, 2019
Shuruucda Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta ee Wax ka Baddalaadda Sharciga Xeerarka Falalka Khatarta ee Tareenka ayaa dhaqan galay ka dib markii lagu faafiyay Gazette Rasmiga ah. Waxa laga keenay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha: KASOO GUDBINTA XEERARKA AMMAANKA AMMAANKA EE AMMAANKA [More ...]
CHP Emre, Ciqaabta Ciqaabta Burcad-badeednimadu Ku Gashay Ajandaha
Kuxigeenka CHP Zeynel Emre, '2. Milkiileyaasha gawaarida fasalka, 15 Luulyo Martyrs Bridge iyada oo loo marayo gudubista ganaaxyo maamul oo ay ugu wacan tahay Wasiirka Maamulka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, sababtuna tahay ogeysiis dambe [More ...]
400 Liraya Lars Kars
Wadaxaajoodkii ka dhexeeyay Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan iyo Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy, ayaa iibinta tikidhada Turki East Express, kaas oo la qaban doono May 29. [More ...]
50 Muujinta Awoodda ee Kartep's 1 Sanadle Imaginary Cable Imaginary
Duqa magaalada Kartepe Mustafa Kocaman, qandaraaslaha gacanta ku hayey dhismaha wadada xariga laakiin ma uusan bilaabin mashruucan sababao dhaqaale awgood, wuxuu ku dhawaaqay inay ogyihiin bilaha 1 inay bilaabaan mashruuca. Kocaman, “Qandaraasle [More ...]
Tijaabada Engineeraha Tijaabada 10 Available Available
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha ğinde Regulation ee Wax ka Bedelaada Xeerarka Baabuur wadista yayımlan waxaa lagu daabacay Rasmiga rasmiga ah lana dhaqan galay. Laga soo bilaabo Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha: DIIWAANGALINTA DIIWAANGALINTA JAMHUURIYADA TABABBARKA JOOJI 1 - [More ...]
Madaxwaynaha Kalayci wuxuu u kala dirayaa Isftari rakaabka
Duqa Magaalada Karaman Savas Kalayci ayaa soo diray xirmooyin cunno oo deg deg ah si loogu tababaro rakaabka iyo saraakiisha safri doonta inta lagu gudajiro saacadda afurka. Dawlada Hoose ee Karaman, oo kumanaan kun oo muwaadiniin ah kula kulantay barnaamijyada Iftar ee xaafadaha inta lagu jiro bisha Ramadaan, [More ...]
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Guler, in kasta oo ay xaqiiqadu tahay in ciidanku uusan joogin xeebta Badda Madow ee ku filan inay ka faa'ideystaan ​​badda, "waa inaan nabad la galno badda," ayuu yidhi. “XARUNTA XIRIIRKA WAA MACLUUMAAD MUHIIM AH MUHIIM” [More ...]
50 Dabbaaldegga Wadada Wadada ee Tarsus ayaa la soo gabagabeeyay
Degmooyinka Mersin Metropolitan, degmada Tarsus ee Kadelli, Çavuşlu, Koçmarlı, Yanıkkışla, Karakütük, Alibeyli iyo Taşobası ayaa muddo dheer u hayey kooxda 50 sanadka. Kadelli, Çavuşlu, Koçmarlı, Yanıkkışla, Karakütük, oo xiriir la leh Tarsus, [More ...]
Kocaeli Metropolitan Municipal 16 May kulan baarlamaaneed oo la qabtay bishii Maajo khamiista, go'aamada muhiimka ah way ka farxin doonaan muwaadiniinta. Ramadaanka ka sokow, 19 May ee Maalinta Dhallinyarda iyo Isboortiga waa lacag la'aan. [More ...]
Taageero buuxda oo uu ka helay Madaxtooyada SOMer for Young Entrepreneurs
Duqa Magaalada Magaalada Izmir Metropolitan Tunç Soyer wuxuu kaloo taageero kahelay ardayda Schooliğli High School ardayda oo lagu soo gabagabeeyey tartan hal-abuurnimo oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Tacliinta Qaranka oo ay la gashay shirkadda "Bikeys Young Achievement Kurd" ay dhiseen. Dhallinyarada ganacsatada ah ini [More ...]
Maanta taariikhda: 18 May 1936 Saldhigga Erzurum-Sivas